I China ZZ Eco Iimveliso zeswekile yeBhabha yeCuba I-Las-Fits 8, 12 kunye ne-16 ye-oz-1000 yamanani abavelisi bebhokisi kunye nabaxhasi | ZHONGSHENG
Izinto ze-ZZ Eco I-Sugarcane Bagasse Ikomityi yeKhofi yeLasi yeLas-Fits 8, 12 kunye ne-16 oz-1000 yamanqaku ebhokisi
Into Hayi: I-PL-01
Ubungakanani: I-93 * 20mm
Sika ubunzima: 4.5g
Ubungakanani beCarton: 46 * 27 * 37.5cm
Ukupakisha: I-20 * 50pcs
Ukusetyenziswa: Ihotele, Indawo yokutya, iKhaya
Yenzelwe ngokuthe ngqo i-8-eunzi yethu, i-12-eunzi kunye ne-16-ounce ye-coffee eyilahliweyo kunye neendebe ezilahliweyo, ezi ziqwenga zommoba zenza i-oda yekofu ibe ikhuselekile kwaye ikhuselekile. Zenziwe nge-100% yengxowa yengxowa yeswekile, ezi ziqhosha zihambelana ngokuqinileyo neekomityi zethu - ngakumbi ukudibanisa iikomityi zethu ezenziwe nge-pewter-ukuqinisekisa ukuba ikofu yakho esandula ukwenziwa okanye ii-odolo zeti zihlala zishushu kwaye zintsha qho. Ukuthambeka kwaye kunesitayile, ezi ziqhosha ziyahambelana kwiindebe zazo ezihambelana ngokuqinileyo, ukukhusela abathengi ekuchitheni kunye nokugcina iziqulatho zishushu. Uya kufumana i-1000 yezi lids ngomyalelo. Iindebe zekofu kunye neekomityi zeti zinokuthengwa ngokwahlukeneyo.
Izinto ze-ZZ Eco I-Sugarcane Bagasse Ikomityi yeKhofi yeLofu ifihlekile 8, 12 kunye ne-16 oz. -Ibhokisi ye-1000 yokubala Yenzelwe ngqo i-8-eunzi yethu, i-12-eunzi kunye ne-16-ounce yeekomityi zekofi ezilahliweyo kunye neendebe ezilahliweyo, ezi ziqwenga zommoba zenza i-odolo yekofu ikhuseleke kwaye ikhuselekile. Zenziwe nge-100% yengxowa yengxowa yeswekile, ezi ziqhosha zihambelana ngokuqinileyo neekomityi zethu - ngakumbi ukudibanisa iikomityi zethu ezenziwe nge-pewter-ukuqinisekisa ukuba ikofu yakho esandula ukwenziwa okanye ii-odolo zeti zihlala zishushu kwaye zintsha qho. Ukuthambeka kwaye kunesitayile, ezi ziqhosha ziyahambelana kwiindebe zazo ezihambelana ngokuqinileyo, ukukhusela abathengi ekuchitheni kunye nokugcina iziqulatho zishushu. Uya kufumana i-1000 yezi lids ngomyalelo. Iindebe zekofu kunye netiacups zingathengwa ngokwahlukeneyo.
I-80mm / 90mm yeNdebe yeLifa
Umbala: Wendalo kunye noMhlophe
Izithako: IBagasse & Bamboo
Ubungakanani: Ububanzi be-87mm * Ukuphakama kwe-18.5mm (80mm)
Isentimitha engu-94mm * ubude ngu-20.5mm (90mm)
Ubunzima beNet: 4-5g (± 0.5g)
Iikomityi ezifanelekileyo: iindebe ezinobubanzi obuyi-80mm / 90mm, zihlala zi-6-16oz
I-50pcs / ipakethe
I-1,000pcs / ctn
Ubungakanani beCarlon: 45 * 30 * 36.5cm / 40 * 28 * 49cm
Kujikeleze i-1,360ctns / 40HQ (80mm)
Ixesha lokukhokela: 1 * 40 ”HQ malunga ne-20-25 yeentsuku
Umthamo wokubonelela: iiyunithi ezingama-2,400,000 ngenyanga
1. Indalo: I-100% i-fiber pulp yendalo, i-heathy, i-100% ye-Biodegradable kunye ne-ecof Friendly kwizinto eziluhlaza
Ayinabungozi: Akukho nto inetyhefu okanye i-odor ekhutshiweyo nangona kubushushu obuphezulu okanye kwimeko ye-acid / alkali: ukhuseleko lwe-100% lokudibana kokutya
I-Microwaveable: kukhuselekile ukuba isetyenziswe kwimicrowave, kwi-oveni nakwifriji
I-Biodegradable kunye ne compost:I-100% ye-biodegrade kwisithuba seenyanga ezimbini: inkunkuma iya kubola ibe yi-CO2 NAMANZI: iqinisekiswe yi-BPI / umgquba olungileyo
Inokuphinda isebenze; Ukuvuseleleka, ukuphinda usebenzise iphepha, ukunciphisa isidingo sezinto ezisekwe ipetroli
Amanzi kunye nobungqina obushushu:I-248 ° F / 120 ° C ioyile eshushu kunye ne-212 ° F / 100 ° Chot yokulwa namanzi
Umgangatho + kunye nokuqina: amandla agudileyo nongaphezulu; ukuzinza: ubungqina obuvuza, Ukuncamathela komda kungashiywa kwimigca ye-auto
Uhlobo: ngaphezu kwezinto ezingama-200 zezinto ozikhethileyo
Edlulileyo: Izinto ze-ZZ Eco I-Sugarcane Bagasse Ikomityi yeKhofi yeLasi yeLas-Fits 8, 12 kunye ne-16 oz-1000 yamanqaku ebhokisi
Okulandelayo: Iimveliso zeZZ Eco ezi-6 ii-intshi eziJikelezwe ngePayoriya zeBasasse Plas, ezingasuswayo kunye nezoEco-Friendly, iPack ye-1000.
Iimveliso zeZZ Eco zeBiodegradable 2 OZ Sugarcane Ba ...
ZZ Eco Iimveliso zeswekile yeBhabha yeKhofi yeCuba ...
Iimveliso zeZZ Eco zeBiodegradable ze-7 OZ iswego Ba ...
Iimveliso zeZZ Eco zeBiodegradable 4 OZ Sugarcane Ba ...
Iimveliso zeZZ Eco zeBiodegradable zeswekile zeBasi ...